गिफ्ट कार्ड अनलाइन किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्! | Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 26, 2006 मङ्गलबार, डिसेम्बर 26, 2006 Douglas Karr
छुट्टीको लागि मात्र समयमा। के तपाईंलाई थाहा छ सबै उपहार कार्डहरूमध्ये १०% कहिल्यै रिडिम हुँदैनन्? खुद्रा विक्रेताको लागि यो निःशुल्क पैसा हो।
उपहार कार्ड पाउनुभयो जुन तपाईं कहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्न? यसलाई बेच्नुहोस् Swapagift!
तपाईं आफ्ना सबै साथीहरू, परिवार, र सहकर्मी उपहार कार्डहरू खरीद गर्न जानु अघि, तपाईंले तिनीहरूलाई खरीद गर्नु पर्छ Swapagift... छुट मा!
हेक, औसत छूटको साथ १२% यस खरीद गर्दा, किन उपहार कार्ड अनलाइन किन्नुहुन्न र तिनीहरूसँग तपाइँको नियमित किनमेल गर्नुहुन्छ?
मैले आज जाँचें र म $ for$ को लागि $ $० स्टारबक्स कार्ड किन्न सक्छु! त्यो नि: शुल्क मोचा हो!
नोट: Swapagift.com भुक्तानी हुनु अघि उपहार कार्डमा रहेको शेष रकम प्रमाणित गर्दछ। कस्तो राम्रो विचार!
डिसेम्बर १, २०१ 26 2006:२:2 अपराह्न
मैले अर्को पनि भेट्टाए:
मार्क्स 10, 2007 मा 5: 42 PM
Swapagift.com को चयन उत्कृष्ट छ। मैले धेरै कार्डहरू खरीद गरें, र तिनीहरूको सँधै बढुवा र बिक्री हुन्छ। भर्खर विक्टोरिया गोप्य कार्ड किनेको २०% छुट बिना र शिपिंग शुल्कहरू।